News Archives - Tha Dinn Oo
Posted by hanminhtet — December 10, 2019 in News
လတ်တလောမှာတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ တစ်ခဲနက်ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ရရှိထားသူကတော့ မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန်ပါ။ သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေးပရိသတ်များသာမကပဲ ထိုင်နိုင်ငံ ကောင်မလေးတွေပါ အားပေးနေရတာပါ။ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး ဝါရင့် အနုပညာရှင်များကပါ ချီးကျူးနေရတာပါ။ အခုမှာလည်း ရန်ကုန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပတ်ပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ပိုင်တံခွန်ဟာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစ်စထက်တစ်စ နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များလာတဲ့ အပြင် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေနဲ့တရင်းတနှီးရှိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲက အားပေးမှုကို ရရှိထားတာပါ။ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်ကြီးကိုအမြဲဝေမျှပေးနေတာပါ။ အခုမှာလည်း မုံရွာကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိနေတာပါ။ သူ့ရဲ့…
ဒီနေ့ညမှာတော့ Myanmar Idol ကနေ လက်ပြနှုတ်ဆက် အိမ်ပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ နော်စေးစေးထူး
Posted by hanminhtet — December 7, 2019 in News
မြန်မာအိုင်ဒေါကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက်ပိုပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေခဲ့ပါပြီ။မနေ့ညကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက် ဟေမာန်ဆောင်းသီချင်းများသီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။Top6တွေကတော့ အကြိတ်အနယ်ကိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ “ဟေမာန်ဆောင်းသီချင်းများ” သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှု Performance show မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားဖူးတဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းတော်တော်များများနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ညမှာတော့ Myanmar IDol ကနေထွက်ခွာရတော့မယ့် တစ်ယောက်ကတော့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နော်စေးစေးထူး ဟာ Myanmar idol ကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရတော့မယ့်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ နော်စေးစေးထူး အတွက် အားပေးစကားလေးပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာ “လိပ်ပြာစံအိမ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ ဆု ၆ ဆု ရရှိ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ၂ ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “2019 Awards Programme Asian Academy Creative Awards” ဆုပေးပွဲမှာ “ လိပ်ပြာစံအိမ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ဆု ၆ ဆု ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ကျနော်တို့ ထုတ်လုပ်ရေးအနေနဲ့ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတွေ သွားရောက်ယူရတဲ့အတွက် အများကြီး ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီပွဲကြီးက စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၂ ကြိမ်မြောက် ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝင်ရောက်…
ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းတက်ရောက်လာတဲ့ မိုးအောင်ရင်ကို ကာမလိမ်လည်ရယူမှုဖြင့် တရားစွဲထားတဲ့ ရည်းစားဟောင်း
Posted by hanminhtet — December 6, 2019 in News
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် ကို ကာမလိမ်လည်မှု ပုဒ်မ ၄၁၇ဖြင့် သူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်း က ရန်ကင်းတရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၆ရက်နေ့ မနက်မှာ တရားရုံးချိန်းကို လာရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Photo Credit : Popular Journal
Training ဆင်းနေတဲ့ ဖေဖေအောင်သူကို လိုက်စောင့်ပေးနေတဲ့ သားလေးကိုကိုးနဲ့ မေမေပိုးအိအိခန့်
မြန်မာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကြီး ဘောလုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အောင်သူ ရဲ့ ဇနီးချောလေး သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် ဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေ ချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။အောင်သူနဲ့ ပိုးအိအိခန့်တို့က ခုဆိုရင် ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့ သားလေး တစ်ဦးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပိုးအိအိခန့်က သားလေးနဲ့ အတူ ခင်ပွန်း training ဆင်းနေစဉ် လိုက်စောင့်ပေးနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အောင်သူနဲ့ ပိုးအိအိခန့်တို့ က သားဦးလေးကို ဂျူလိုင် ၁၉ ဘန်ကောက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကို သူတို့ရဲ့…
Posted by hanminhtet — December 5, 2019 in News
တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမက ဆံနွယ်ရှည်လေးတွေရှိတာတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့တစ်ခဲနက်ဝန်းရံခြင်းကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် ပိုင်တံခွန်ပါ။ သူဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဝါသနာပါပြီး တစိုက်မတ်မတ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်တာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပါ။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေက မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမကပဲ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်ပါ ထင်ရှားကျော်ကြားနေတာပါ။ လတ်တလောမှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာပါ။ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် အမြဲဝေမျှပေးနေတာပါ။ အခုတစ်ခါမှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ တင်ထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေရတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်တံခွန်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Photo Credit- Paing Takhon’s…
Posted by hanminhtet — December 4, 2019 in News
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အမြဲတမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း တစ်ခြား ဘာမှ မလိုပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးသာ လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရင် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့အတွက် ကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေ အလိုလို ပြည့်စုံသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဘာမှ မလိုပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရင် ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ တစ်ခြားလိုအပ်ချက်တွေ အလိုလို ပြည့်စုံသွားမှာပါ။ အခုလည်း အိမ်ထောင်တစ်ခု မငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးအဖြစ် အပြစ်မဲ့သမီးငယ်လေးတစ်ယောက် လူ့လောကကနေ မလိုအပ်ဘဲ ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့အနောက်ပိုင်း၊ အထက်မြင့်လူနေအဆောက်ဦတစ်ခုမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစုလေးမှာ…
ဒီကနေ့ အသက်(၃၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကျရောက်လာတဲ့ ထိုင်းမင်းသားချော Mario Maurer
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ (၄)ရက်နေ့ကတော့ ပရိသတ်ချစ်တဲ့ ထိုင်းမင်းသားချော Mario Maurer ရဲ့ မွေးနေ့ လေးပါ။ Mario ကိုတော့ December 4, 1988 မှာ မွေးခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ မွေးနေ့ လေးကတော့ သူ့ရဲ့ အသက် (၃၁)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပါ။ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာတော့ အမှတ်တရ Post တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက်ကို တော့ ဒီနေ့ အသက် (၂၀) ပြည့်ပြီဆိုပြီး စနောက် တင်ခဲ့ပါတယ်။…
ယခုလအတွက် အောင်ဘာလေသိန်း (၁၅၀၀၀) ကံထူးရှင် ပေါ်ထွက်လို့ လာပါပြီ 😱😍
ပရိသတ်ကြီရေ ဒီလရဲ့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုရှင်ကတော့ ရှာဖွေရခက်နေသလို ဘယ်သူပေါက်တယ်ဆိုတာလဲ မသိကြဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်ကတော့ ပေါ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ဌက်ပျောတောကျေးရွာ အောက်စု မှ ဒေါ်ထိုက် မှ သိန်း ၁၅၀၀၀. ဆုကြီး ထိုက်တန်စွာ ဆုခူးပေးလိုက်ပါပြီး ထပ်တူ ဝမ်းသာမိပါသည်။ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ဌက်ပျောတောကျေးရွာ အောက်စု မှ ဒေါ်ထိုက် မှ သိန်း ၁၅၀၀၀. ဆုကြီး ထိုက်တန်စွာ ဆွတ်ခူးပေးလိုက်ပါပြီး ထပ်တူ…
ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကို ရည်စားဟောင်းက တရားစွဲဆို
ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကို ရည်စားဟောင်းက ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ဦးတိုက်လျှောက်ထား တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်က စုံစမ်းသိရသည်။ မိုးအောင်ရင်၏ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူဟုဆိုသည့် မ . . . . က နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ် တရားရုံးသို့ လာရောက်ပြီး သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်က ၎င်းအား လက်ထပ်မည်ဟုပြောဆိုပြီး ကာမလိမ်လည်ရယူကာ လက်ထပ်ခြင်းမရှိသဖြင့် လာရောက်ဦးတိုက်လျှောက်ထား တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံး သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိထံမှ သိရသည်။ ထိုသို့တရားစွဲဆိုရာ ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှ တရားလို…